I-ConnectLeader TopRung: I-B2B Sales Gamification kanye neThuluzi Lokulawula Ukusebenza | Martech Zone
Umsunguli wezobuchwepheshe bokuthengisa we-B2B I-ConnectLeader umemezele ukutholakala kwayo OkuPhezulu ukuthengiswa kokuthengiswa kanye nethuluzi lokuphatha ukusebenza. I-TopRung isebenzisa amandla wokuncintisana kwethimba ukuqondanisa, ukwamukela nokusheshisa imisebenzi yokuthengisa, kanye nokwamukela inqubo yokuthengisa nokwenziwa kwezingxoxo eziholayo ezingaphezulu eziba ngamathuba wepayipi. I-TopRung isebenzisa amandla wokuncintisana kweqembu, ezemidlalo nokuzijabulisa:
Qondanisa, wamukele futhi usheshise imisebenzi yokuthengisa
Ukwamukelwa kwenqubo yokuthengisa yeDrayivu
Dala izingxoxo eziningi zokukhiqiza eziba ngamathuba wepayipi.
ITopRung yaqanjwa njenge- owamanqamu kumiklomelo ye-BIG yeBhizinisi emkhakheni woMkhiqizo Omusha Wonyaka.
Sisebenzisa i-TopRung ukuxazulula ingxenye ebaluleke kakhulu yenqubo yethu yokuthengisa-ukugcina ama-reps ahilelekile futhi ekhuthazekile ngokungaguquguquki nangokuncintisana okuncane okwakhelwe ngaphakathi. UKatie Lawrence, uCareerMinds VP Wezentengiso
Ukukhiqizwa kwe-ConnectLeader kubeka isici somuntu kwezemidlalo futhi kumnandi kunqubo yokusebenza kwezinhlelo zokuthengisa eziqinile zanamuhla.
Imidlalo ihlale igcina abadlali bezibandakanya njengoba bencintisana ukufeza izinhloso ngokugqugquzela, ukucabanga kokudala nokuhlanganisa iqembu. I-ConnectLeader's TopRung gamification ithatha yonke injabulo yenselelo esekwe kumdlalo futhi iyayihlanganisa nezinhlelo zokuthengisa zesimanje ukuthuthukisa ulwazi lokuthengisa nokuvala isivumelwano. USenraj Soundar, Isikhulu Esiphezulu se-ConnectLeader
I-TopRung ibuye ifake zonke izinto ezijwayelekile kudatha ye-Salesforce ne-ConnectLeader, ukulinganisa ithuluzi nganoma yisiphi isidingo sebhizinisi. Izici ezingeziwe zifaka:
Imincintiswano - Ukuqondanisa nontanga ukuthola abawinile ngenkathi kusethwa nezinselelo emaqenjini okuthengisa ukuthola ukuthi ngubani ogcina ephezulu.
Ukuhlonipha - Ukulungiswa kokuthengiswa komsebenzi nomsebenzi ngokugcizelela ukusebenza kozakwethu, osebenza nabo nabaphathi.
Izaziso - Ukuqhubekela phambili kwebhodi yabaphambili kusiteshi se-TV noma esikrinini esifakwe ngaphezu kwendawo yokuthengisa – ngamaculo enziwa ngezifiso kanye nezixwayiso zezindaba ezihamba phambili ezigubha izigaba ezinkulu.
Ukuhlaziywa Kwemininingwane Ecebile - Ivumela abaphathi bezentengiso ukuthi babe nayo yonke idatha yokusebenza yokuthengisa endaweni eyodwa. Imisebenzi yokuthengisa, imiphumela kanye nokuqhubekela phambili kuyabanjwa ukuze kunikezwe abaphathi ukuhlaziywa okuhamba phambili okuthuthukile kanye namandla okulungisa noma okuthuthukisa isimilo.
I-ConnectLeader inikeza ubuchwepheshe bokuthengisa obusheshayo bazo zonke izinhlobo zezindima zokuthengisa ukukhulisa imali engenayo ephezulu ngokuxhumana okusheshiswayo, izindleko ezincishisiwe nezinsizakusebenza zokumaketha ezisebenza kahle ukuze zisebenze kangcono. Ipulatifomu ye-ConnectLeader Intelligent Sales Acceleration inika amaqembu okuthengisa nawokumaketha amathuluzi anamandla okukhomba nokubandakanya amathemba wokuthengisa esezingeni eliphakeme futhi afaka izixazululo zokwenza ukuxhumeka kokuthengisa kuzo zonke izinhlobo zamaqembu ezentengiso namabhizinisi wokuthuthukisa amabhizinisi. Lobu buchwepheshe obusha obususelwa emafini bakhiwe kunjini ye-ConnectLeader Adaptilytics ™ yedatha ekhomba futhi ebeka phambili uhlu lwezingcingo eziphumayo ukuqinisekisa ukuthi abahola phambili bakho bathintwa kuqala.
Tags: yizinhleukuncintisanaconnectleaderukukhuliswakatie lawrenceukuhola isizukulwaneipayipiumsebenzi wokuthengisaukuncintisana kokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaukuthengiswa kokuthengiswaizinhloso zokuthengisaipayipi lokuthengisaukuncintisana kweqembu lokuthengisaamaqembu okuthengisasalesforcesenraj umsindotoprung